FJKM Ambonin’Ampamarinana Hitsangantsangana eny Amboanjobe ny Zanaka am-pielezana
Lamesa teny Soamandrakizay Natrehana mpino efa ho 1 tapitrisa
Tomefy olona ny kianjan' i Soamandrakizay ary tanaty hafaliana no nandraisan' ireo mpino katolika ny Papa Fransoa teo am-pahatongavany. Fotoan-dehibe tokoa satria ny Papa Ray Masina no nitarika ny fotoam-pihavanana.
Ny alahady faharoa amin’ny volana jona no natokana ho alahadin’ny taranaka na koa ny Fikambanan’ny Zanaka am-pielezana Ambonin’Ampamarinana (FIZAA).
Ny nampiavaka ny fotoana litorjika nanatanterahana izany dia ny toriteny an-kira. Nifarimbona tamin'ny Mpitandrina Raheriarison Lala Théodore tamin’ny toriteny an-kira ny antoko mpihira telo karazana FJKM Tranovato Ambonin’Ampamarinana sy Ramatoa vadin’ny Mpitandrina izay manana fanomezam-pahasoavana amin’ny lahatsoratra sy kanto. Vitsivitsy ihany raha oharina tamin’ny taon-dasa ny zanaka am-pielezana tonga nanatrika. Tontosa tamin’io andro io ihany anefa ny fifidianana nanavaozana ny mpikambana hitantana ny fikambanana mandritra ny fe-potoana manaraka. Lahitokana ary fitovavy mbamin’ny mpanamarim-bola ireo mpikambana vaovao. Ny filoha mpitari-draharaha ihany no lehilahy, dia Atoa Razaka Oliva. Vaindohan-draharahan’ny birao vaovao ny fanomanana ny fitsangantsanganana hatao ny 27 jolay 2019 eny Amboanjobe misy ny tanànan’ny Pasitera Rasolomanana Nehémie mianakavy.